Boomplay အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
5.9.84 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（28.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Boomplay: Download Music Enjoy Offline Music
BoPepay Music အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအနုပညာရှင်များနှင့်တူတူမျိုးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနှင့်တူတူရည်အမျိုးမျိုးဖြင့်တေးဂီတအိမ်များနှင့်တေးဂီတအိမ်ဖြစ်သည်။ SoPepay တွင်အကောင်းဆုံးသီချင်းများ, အယ်လ်ဘမ်များနှင့်ကုသိုလ်0န်ထမ်းများကိုအခမဲ့ရယူပါ။
အဘယ်သူမျှမ WIFI မပြဿနာကသင်ပင်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုမသုံးဘဲ, ဂီတအော့ဖ်လိုင်းနားထောငျနိုငျဒါနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အပူဆုံးသီချင်းများ, အယ်လ်ဘမ်နှင့်အခမဲ့ဖွင့်စာရင်းများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုအဆိုပါ Boomplay ဂီတ Downloader ကို
Boepay Music Player သည် Music Music Player သည် Mustay Music Player သည် Wizkid, Firbky DML, Dado, Stonebwoy, otile brown, zubu, aslay နှင့်အခြားပူ အနုပညာရှင်များ။ သီချင်းသန်း 60 ကျော်နှင့်အတူခရစ်ယာန်များနှင့် g0ံဂေလိ, Afropop & Afropop & Afrofus, Bongo Flava, Hip-hop, Hausa ဂီတ, Fuji, Fuji, Afro Soul, Fuji, နှင့်ပိုပြီး။
songs section အသစ်များနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်သီချင်းများနှင့်အတူအလွယ်တကူနောက်ဆုံးပေါ်သီချင်းများကိုအလွယ်တကူနောက်ဆုံးပေါ်နေပါ။
သီချင်းစာရင်းများ Boomplay ဖွင့်စာရင်းများကိုသင့်ရဲ့ဦးစားပေးနှင့်အကြိုက်ဆုံးများအပေါ်အခြေခံပြီးရုံသင်တို့အဘို့တာဝန်ယူထားသော။ တေးဂီတအသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးစိတ်ဓာတ်တိုင်းအတွက် Playlists ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဂီတအက်ပ်တစ်ခုထက်ပိုပြီးအပူဆုံးဂီတ, ဖျော်ဖြေရေး, အားကစား, အားကစားနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့သတင်းများနှင့်ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်များနှင့်အတူပါ0င်သောအင်တာဗျူးများကိုရယူပါ။ Boupaysay subscriptions များ, airtime များ, airtime များ, ကူပွန်များနှင့် Bouppay ရပ်ကွက်များတွင်ပါ0င်ခြင်းတို့ကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်လက်ဆောင်များကိုရွေးပါ။ သင်၏ SD ကဒ်သို့မဟုတ်ဖုန်းမှဗွီဒီယိုများကို BoPepay Music Player မှဗီဒီယိုများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို BoPepay charts နှင့်အတူထိပ်တန်းသီချင်းများကဘာတွေလဲ။
Boomudduddy Community သို့ဆက်သွယ်ပါ။
@BoomplayMusicNG @BoomplayMusicGH @BoomplayMusicKE @BoomplayMusicTZ
Instagram ကို: @boomplaymusic @boomplaymusicng @boomplaymushgh @boomplaymusicke @boomplaymusic_tz
တွစ်တာ: @BoomplayMusic @BoomplayMusicNG @BoomplayMusicGH @BoomplayMusicKE @BoomplayMusicTZ
@bo ပြည့်စုံသော : @bo ပြည့်စုံခြင်း - Twitter: @bo ပြည့်စုံခြင်း
ဘာအသစ်လဲ Boomplay: Download Music Enjoy Offline Music 5.9.84
2. Register via email now spported.
4.Reduced app lag and optimised performance.
download #BOOMPLAY songs to file manager, and send to ur friend, play it Via other mp3 players.
Boomplay: Download Music Enjoy Offline Music Free 5.9.82
Boomplay: Download Music Enjoy Offline Music Free 5.9.61
Boomplay: Download Music Enjoy Offline Music Free 5.9.43
အရမ်းချစ်တယ်မိန်းမ ရယ် ကိုသားကြီး+မမကြီး
Zay Ye Yan
ခ်စ္သဲတံုးေလး Hlaing. Zin. Chaw